I-DivvyHQ: Ukuhlelwa kokuqukethwe kokuqukethwe kwevolumu ephezulu nokuhamba komsebenzi | Martech Zone
NgoMgqibelo, Septhemba 12, 2015 Douglas Karr
Uma usebenza enkampanini yebhizinisi, ukuhlela okuqukethwe nokwenziwa kumaphakathi necebo lakho lokumaketha jikelele. Inselelo ukuphatha imibono, izinsiza, izabelo, nokubuyekeza isimo somkhiqizo jikelele. SgwiliIpulatifomu inikezela wonke amathuluzi adingekayo kusuka enqubekelweni kuya ekusebenzeni. Ipulatifomu yenzelwe ukushicilelwa kokuqukethwe kanye nemithombo yezokuxhumana.
IDivvyHQ iyithuluzi elisuselwa emafini, ukuhlela okuqukethwe kanye nethuluzi lokuhamba komsebenzi elenzelwe ukusiza abathengisi nabakhiqizi bokuqukethwe bathole / bahlale behlelekile futhi basebenze ngempumelelo izindlela zokukhangisa ezifunayo, eziyinkimbinkimbi nezisemqoka. Ukusebenza okuhlukile kwe-Divvy kuhlanganisa amakhalenda asuselwa kuwebhu, ukuphathwa kokuqukethwe kanye nokusebenzisana okuku-inthanethi ukusiza amaqembu wokuqukethwe womhlaba wonke abambe imibono yokuqukethwe, anikeze futhi ahlele amaphrojekthi wokuqukethwe, akhiqize noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe futhi ahlale phezu kwezikhathi zokugcina zokukhiqiza.
Dashboard - Thola isifinyezo esisheshayo sokuthi yini efanelekile, okwenziwayo nokuthi iqembu lakho lisebenza ini njengamanje.
Amakhalenda Awabelwe Unlimited - Amakhalenda amaningi abiwe njengoba udinga ukugcina umhlaba wakho uhlelekile neqembu lakho ekhasini elifanayo.
Ukuphathwa kokuhamba komsebenzi okulula - Akunandaba ukuthi usayizi weqembu lakho, noma ubunzima benkqubo yakho yokukhiqiza, iDivvy izokusiza ukuthi okuqukethwe kwakho kukhiqizwe, kuvunyelwe futhi kushicilelwe kahle.
Noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe - Ukhiqiza okungaphezu kokuqukethwe kwedijithali. Sebenzisa iDivvy ukusiza ekuhleleni nasekukhiqizeni noma iluphi uhlobo lokuqukethwe odinga ukukulawula.
Okuqukethwe / Ukushicilelwa Komphakathi - Susa ipulatifomu egxuma futhi uthumele kalula okuqukethwe komphakathi nezithombe ngqo ku-Facebook, Twitter nakwabanye.
Paka Imibono Yakho Emikhulu - Kwazi bani ukuthi imibono yokuqukethwe ingavela nini futhi ivela kubani. I-Divvy Parking Lot ivumela ithimba lakho ukuthi ligcine imibono yabo kuze kube umhlangano wakho olandelayo wokuhlela okuqukethwe.
Security - Gcina okuqukethwe kwakho kuphephile ngezinyathelo zokuphepha ezibekwe yi-DivvyHQ.
Ungazama i-DivvyHQ mahhala nge ukubhalisela esizeni sabo.
Tags: ukwabiwa kokuqukethweikhalenda lokuqukethweukusebenzisana kokuqukethweimiqondo yokuqukethweukugeleza kwenqubo yokuqukethweukuhlela okuqukethweamadisinga
Umthelela Wokuqoqa Nokuthuthukisa Idatha ye-B2B Yokumaketha